IPFS: Interplanetary File System ကို GNU / Linux တွင်မည်သို့သုံးရမည်နည်း။ | Linux မှ
Linux Post Install လုပ်ပါ | | သင်ခန်းစာများ / လက်စွဲ / သိကောင်းစရာများ
လောလောဆယ်, အပေါ် browsing အင်တာနက် (Cloud / Web) အဓိကအားဖြင့်အခြေခံသည် Hypertext လွှဲပြောင်း protocol ကို (HTTP), IE, သည် HTTP သည်စူးစမ်းလေ့လာရန်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်အသုံးပြုသောကွန်ယက်ပရိုတိုကောတစ်ခုဖြစ်သည် World Wide Web (WWW)၊။ ၎င်း၏ဖန်တီးမှုနေ့စွဲကတည်းက (1989-1991) နှင့်၎င်း၏တည်ရှိနေစဉ်အတွင်းကအများကြီးပြောင်းလဲမှုသို့မဟုတ်ဗားရှင်းရှိခဲ့ပါတယ်။ HTTP ၁.၂, သည်အထိ, 15 နှစ်ကြာအင်အားသုံးခဲ့သည် HTTP ၁.၂, မေလ 2015 ခုနှစ်တွင်ဖြန့်ချိခြင်းနှင့်ယခုဖြစ်နိုင်သည်, HTTP ၁.၂ မကြာမီဖြန့်ချိလိမ့်မည်။
သို့သော်ဖွံ့ဖြိုးမှုတွင်အခြားရွေးချယ်စရာ၊ ဆန်းသစ်။ စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းသော protocol များရှိသည်။ သူတို့ထဲကတစ်ခုဖြစ်သည် IPFS အရာအပေါ်အခြေခံသည် P2P hypermedia protocol ကို (အုပ်စုတူအဆင့်တူအချင်းချင်းမှလူတစ် ဦး ချင်း) ၎င်းကိုပြုလုပ်ရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည် ပိုမိုမြန်ဆန်။ စိတ်ချရသော၊.
ကိုခေါ်အစောပိုင်းကပို့စ်တွင် "IPFS: P2P နှင့် Blockchain နည်းပညာနှင့်အတူအဆင့်မြင့်ဖိုင်စနစ်" ကျွန်ုပ်တို့သည်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုမှတ်ချက်ပေးသည် - IPFS ဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း၊ မည်သည့်လက္ခဏာများရှိသည်၊ မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်စသည်ဖြင့်အခြားအရာများဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်အောက်ဖော်ပြပါအချက်များမှခေတ္တကိုးကားသင့်သည်။
"... IPFS သည်လက်ရှိ Hypertext Transfer Protocol (HTTP) ကိုဖြည့်စွက်နိုင်သည်သို့မဟုတ်၎င်းသည်လက်ရှိကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ Cloud တွင်သတင်းအချက်အလက်များကိုလွှဲပြောင်းပေးသောတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် IPFS သည်ဗဟိုဆာဗာများအပေါ် အခြေခံ၍ အင်တာနက်၏လက်ရှိလည်ပတ်မှုကို P2P Technology and Blockchain အောက်တွင်အပြည့်အဝဖြန့်ဝေထားသောဝက်ဘ်သို့အသွင်ပြောင်းရန်ရည်ရွယ်သည်။ သို့ဖြင့်ဖြန့်ဝေထားသောဖိုင်စနစ်ဖြစ်ရန်၊ ကွန်ပျူတာစက်ပစ္စည်းများနှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်အကြောင်းအရာအားလုံးကိုတူညီသောဖိုင်စနစ်နှင့်အတူတစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာနှင့်ချိတ်ဆက်နိုင်သည့်လမ်းညွှန်များနှင့်ဖိုင်များပါဝင်သည်။".
ဤအတောအတွင်းယခုငါတို့အာရုံစိုက်ပါလိမ့်မယ် တပ်ဆင်ခြင်းနှင့်အသုံးပြုခြင်းသူ့ထံမှ တရားဝင်လိုင်း အတွက် GNU / Linux များ.
1 IPFS - Interplanetary File System ကိုဘယ်လိုအသုံးပြုမလဲ။
IPFS - Interplanetary File System ကိုဘယ်လိုအသုံးပြုမလဲ။
client ကို download လုပ်ပါ ipfs-ဒက်စ်တော့ del တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်။ ဆောင်းပါးရေးသားစဉ်တွင်ရရှိနိုင်သောမူကွဲသည် 0.10.4, အောက်ပါပုံစံများဖြင့်ရရှိနိုင်ပါသည်:
ပြီးတာနဲ့ငါတို့အမှု၌ဖိုင်ကို download လုပ်ပြီး ipfs-desktop-0.10.4-linux-amd64.debအောက်ပါ Command ဖြင့် install လုပ်ပါ။
ပြေးပါ «Cliente de escritorio IPFS Desktop» မှ main menu ကို, အင်တာနက်အပိုင်း၌တည်ရှိသည်။ အကယ်၍ ၎င်းသည်ကျေနပ်ဖွယ်ကောင်းသောအလုပ်မလုပ်ပါက၊ အောက်ပါ command များကိုစစ်ဆေးကြည့်ပါ။
ဖိုင်တစ်ခုတင်ပါ IPFS ကွန်ယက် မှ «Cliente de escritorio IPFS Desktop»အပိုင်းမှ "မှတ်တမ်း" နှင့်ခလုတ်ကိုအသုံးပြုခြင်း "IPFS ထဲသို့ထည့်ပါ"။ ၎င်းမှသင်ဖွင့်နိုင်သည် ဖိုင် (များ) နှင့် / သို့မဟုတ်ဖိုင်တွဲ (များ) ကွန်ပြူတာမှ (သို့) ဝက်ဘ်လမ်းကြောင်းမှတဆင့်တိုက်ရိုက် IPFS။ ထို့အပြင်ဖိုင်တွဲများကိုလည်းဖန်တီးနိုင်သည် «red IPFS» ထိုအရပ်မှ။
ရယူပါ hash သို့မဟုတ်ဖိုင် (များ) နှင့် / သို့မဟုတ်ဖိုင်တွဲ (များ) ၏အပြည့်အဝ ipfs လမ်းကြောင်း ၎င်းမှတစ်ဆင့်ဝင်ရောက်လိုသောကွန်ရက်သုံးစွဲသူများအကြား၊ သုံးမှတ်မီနူး (…) သောအတွက် loaded တစ် ဦး ချင်းစီဒြပ်စင်အတူ «red IPFS».
၏ဝင်ရောက်ခွင့်ကိုစမ်းသပ်ပါ ဖိုင် (များ) နှင့် / သို့မဟုတ်ဖိုင်တွဲ (များ) ဝဘ်ဘရောက်ဇာနှင့် အပြည့်အဝလမ်းကြောင်း ipfs ရရှိသော။ ဘယ်ဥပမာဥပမာဖြစ်နိုင်တယ်၊ 17MB ဗီဒီယိုဖိုင် ဆောင်းပါးအတွက်သရုပ်ပြအဖြစ်ကျွန်ုပ်တင်လိုက်သော
အချုပ်အားဖြင့်သင်တို့ကိုတွေ့မြင်နိုင်သကဲ့သို့လုပ်ထုံးလုပ်နည်းရိုးရှင်းသည်နှင့် «red IPFS» ဥပမာအရင်းအမြစ်များတင်ခြင်းနှင့်မျှဝေခြင်းတို့အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည် ဖိုင် (များ) နှင့် / သို့မဟုတ်ဖိုင်တွဲ (များ) အရွယ်အစားအကန့်အသတ်များ (သို့) သီးခြားအကြောင်းအရာလုပ်ကွက်များ၏သဟဇာတဖြစ်သောကြောင့်အခြားနည်းလမ်းများဖြင့်ဝေမျှ။ မရပါ။
ငါတို့မျှော်လင့်ပါတယ် "အကူအညီအနည်းငယ်သာပို့စ်" ဒီထူးခြားသောနှင့်ဝတ္ထုသုံးစွဲဖို့ဘယ်လိုပေါ် Interplanetary ဖိုင်စနစ် ၏အမည်အောက်မှာလူသိများ «IPFS», သောကမ်းလှမ်း ဖြန့်ဝေထားသောဝဘ်အောက်မှာ P2P hypermedia protocol ကို ကလုပ်ဖို့ ပိုမိုမြန်ဆန်။ စိတ်ချရသော၊ထိုရိုးရာသည်လူအားလုံးအတွက်အလွန်အကျိုးရှိပြီးအသုံးဝင်သည် «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» နှင့်၏အံ့သြစရာ, အလွန်ကြီးမားသောနှင့်ကြီးထွားလာ၏ applications များ၏ဂေဟစနစ်၏ပျံ့နှံ့ဖို့ကြီးစွာသောအလှူငွေ၏ «GNU/Linux».
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » သင်ခန်းစာများ / လက်စွဲ / သိကောင်းစရာများ » IPFS: Interplanetary File System ကို GNU / Linux တွင်မည်သို့သုံးရမည်နည်း။
LMS ပလက်ဖောင်းများ - အွန်လိုင်းသင်ယူမှုစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်များ